Embassy of The Republic of The Union of Myanmar » Declarations » Page: 11
by Admin on 10/07/2013 at 9:13 PM
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်၍ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားသူ လုပ်ငန်းရှင် များအနေဖြင့် မိမိတို့ဆောင်ရွက်လိုသည့် ကိစ္စအရပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့်အချက် များအား အောက်ပါလိပ်စာများအတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိ ပေးအပ်ပါသည်- လာရောက်၍ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားသူ လုပ်ငန်းရှင် များအနေဖြင့် မိမိတို့ဆောင်ရွက်လိုသည့် ကိစ္စအရပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့်အချက် များအား အောက်ပါလိပ်စာများအတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိ ပေးအပ်ပါသည်- (က) ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဖုန်း – ၉၅-၆၇-၄၀၆၁၂၂၊ ဖက်စ် – ၉၅-၆၇-၄၀၆၁၂၃ e-mail : majanoo@gmail.com (ခ) […] ↓ Read the rest of this entry…
နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပမည့် ရေွှရတုမြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ အစီအစဉ် ပြောင်းလဲခြင်း
by Admin on 24/06/2013 at 9:25 PM
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု၊ပညာသင်နှစ် နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ အခြေခံပညာ စာပေးစာယူသင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း
by Admin on 13/06/2013 at 10:55 AM
For more detail, please download HERE.
၂၀၁၂ – ၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ အတန်းလိုက် အောင်မြင်သူများစာရင်း (ဒဿမတန်း)
by Admin on 13/06/2013 at 8:05 AM
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှ ၂၇ ရက်အထိ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပမည့် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ အစီအစဉ်
by Admin on 13/06/2013 at 7:59 AM
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှ ၂၇ ရက်အထိ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပမည့် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ အစီအစဉ် For more information, please download HERE.
Bid to Conduct Petroleum Operations (Shallow and Deep Water Blocks)
by Admin on 14/05/2013 at 9:32 PM
The Ministry of the Republic of the Union of Myanmar hereby announces Invitation of Sealed Bids of Petroleum Operations to be conducted in Myanmar Onshore Areas (Shallow and Deep Water Blocks) on production sharing basis. For more detail information, please […] ↓ Read the rest of this entry…
Bid to Conduct Petroleum Operations
by Admin on 14/05/2013 at 8:48 PM
The Ministry of the Republic of the Union of Myanmar hereby announces Invitation of Sealed Bids of Petroleum Operations to be conducted in Myanmar Onshore Areas on production sharing basis. For more detail information, please download HERE.
Domestic Support Worker Training Center ဖွင့်လှစ်ကြောင်း
by Admin on 11/05/2013 at 9:05 PM
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
by Admin on 11/05/2013 at 9:01 PM
Myanmar Version DOWNLOAD HERE English Version DOWNLOAD HERE
(၂၀၁၂ ခုနှစ်) အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲအောင်စာရင်း
by Admin on 11/05/2013 at 8:22 PM